Whisky "Dzhek Deniels": umlando nesenzakalo, izinhlobo, intengo kanye kusebenta lokungiko isiphuzo
Whisky - eyaziwa isiphuzo ezihloniphekayo, okuyinto iyikhaya Scotland. Omunye okuhlukile igama layo - tape (scotch) futhi elihunyushwa ngokuthi "Scottish". Yenziwe utshwala ikhiqizwa okusanhlamvu, futhi amanzi ahlanzekile, nemvubelo, bese kugcinwa imiphongolo ekhethekile eyenziwe kusukela oki, * cherry ngoba inombolo ethile edlule. Yiqiniso, eScotland akaphinde asibalele esinakho kukhiqizwe isiphuzo. Okwamanje, amazwe amakhulu nogologo ezikhiqiza kukhona USA, Japan, Canada nabanye. Omunye brand ethandwa kakhulu American whiskey "Dzhek Deniels". Konke mayelana nale isiphuzo - Imininingwane kamakhi, amafomu, kanye nendlela efanele kakhulu ukuyisebenzisa, funda i-athikili yethu. Khumbula nje ukuthi lokhu - impela olunamandla, iqukethe kuze kufinyelele 45% utshwala, ngakho ukusetshenziswa kwalo ngokweqile kungalimaza impilo yakho.
Indlela yokwenza whiskey "Dzhek Deniels"?
Inkampani-nomkhiqizi isiphuzo ingenye omdala e-United States futhi ukhiqiza nogologo kusukela 1865. Umsunguli Jasper Newton Daniel wazakhela yokukhiqiza ubuchwepheshe ekhethekile, okuyinto namanje igcinwe iyimfihlo. Ngakho-ke, owahlulela napika ikakhulukazi uphawu ukunambitheka kwalo eliphuphile kanye izinga eliphezulu kakhulu, okuyinto ibangelwa filtration akhethekile ukuguga imiphongolo ka calcined kwesihlahla se-okhi emhlophe. Izingxenye eziyisisekelo womshini whiskey "Dzhek Deniels" kukhona ummbila, ibhali, ukolweni amanzi. Njenganoma yimuphi umakhi, inkampani ukhiqiza izinhlobo eziningana isiphuzo, okuyinto zingafani degree of nokuvuthwa. Ngokwesibonelo, ibhodlela nge ilebula oluhlaza yiwona inqaba ncamashi 40 degrees. Lolu hlobo ibizwa ngokuthi "ekuqaleni" ngoba umgqomo nalo ngokwesiko egcinwe izitezi ishede kanye isiphuzo ukuvuthwa ngaphambili zakudala "Jack." Izinhlobonhlobo athandwa kakhulu - ezinegama omnyama nomhlophe, yena sasinamandla (degrees 43). Barrel babo esisogwini izitezi, it is ukukhula kancane isikhathi eside, kodwa ukunambitheka kanye nephunga elimnandi - lesintu, shades ezimibalabala nokukhanya ushokoledi. Noma kunjalo, bonke whiskeys abaneminyaka engu-4 - ncamashi nomnikelo lilondolozwe oki imiphongolo ngaphambi awathele amabhodlela 700 ml. Ngezinye izikhathi ungase ukuthole ku isamba elingavamile "Dzhek Deniels". Whisky 1 Ilitha iyatholakala njengoba amabhodlela collectible - kuze kufinyelele 5 amalitha. Kufika ku-70-yalolucwaningo kwekhulu elidlule, inkampani ukukhiqiza whiskey kanye ukuz - kuze kube iminyaka engu-25, kodwa ngemva kwalokhu kube umkhuba benqabile.
Indlela baphuze whiskey "Dzhek Deniels"?
Lokhu isiphuzo Akusikho lutho ngokuthi muhle. Kungakuhle akakubekezeleli ukwengeza noma iyiphi nezinye izithako, ngaphandle mhlawumbe ice. Lena brand ethandwa kakhulu, ngakho izivakashi imigoqo kanye zokudlela kuvame makudle "Dzhek Deniels". Whisky, intengo okuyinto enkulu ngokwanele (ruble ibhodlela ngayinye mayelana 1500-2000 ezinegama omnyama nomhlophe), zidinga ukwelashwa okukhethekile. Isiphuzo akumele selehlile ngezansi degrees 20, ngaphandle kwalokho ngeke embule ngokugcwele ukunambitheka kwako kanti iphunga, futhi izithasiselo ehlukahlukene (ezifana Coca-Cola) kuphela "clog" isiphuzo shades, enika, eqinisweni, uzizwa okuqukethwe kahle eliphezulu utshwala kuwo. Ngakho-ke, lapho sasihlose ujabulele "Jack", susa ibhodlela kusukela mini-bar kusengaphambili, shisisa ingilazi kancane ongaphakeme esandleni, donsa Iphunga lezimbali kanye ushokoledi neziphuzo sips amancane. Phela, ngakho ukwenza amajaji sangempela esidlule kwengu-150.
Ubhiya Red: ale futhi ungqa
Whisky "Glen Ihlathi": ngobuhle nangobubi bawo
Ubhiya Unpasteurized: ukusetshenziswa futhi eshalofini yokuphila
Of damson iwayini: isinyathelo ngesinyathelo iresiphi
Brandy Georgian "Dugladze, eminyakeni 5": Izibuyekezo
Ezithakazelisa kakhulu inkampani "Lida kubhiya"
Umbani Ball - imfihlakalo ezingaxazululeki bemvelo
Ukwelashwa nokuvikelwa isithende iqhubezela yokwelapha ukushaqeka-wave: ukubuyekezwa. Ukwelashwa nokuvikelwa isithende iqhubezela amakhambi abantu nemithi
Biography kaGaribaldi Giuseppe namaqiniso athakazelisayo okuvela ekuphileni
Amalungiselelo Engamakhambi 'Bronchipret izingane' - insindiso yangempela ukhwehlela
"Empire elingenamikhono": izibuyekezo zamakhasimende, imodeli, intengo, usayizi
Protocol ikhefu ngesikhathi sokuphatha, isigebengu nokulawula inqubo
Indlela yokwenza isitimela "Maynkraft" izindlela futhi ngaphandle
"Finasteride" imithi. Imiyalelo kanye izinkomba
Amafomu esikhumbuzo ku emathuneni: Classic, engavamile futhi akumangalisi ngempela